Manchester United 1-0 Aston Villa: McTominay Oo Ka Caawiyay Red Devils Inay U Soo Baxo Wareega Afaraad Ee FA Cup
HomeWararka CiyaarahaManchester United 1-0 Aston Villa: McTominay oo ka caawiyay Red Devils inay u soo baxo wareega afaraad ee FA Cup
January 11, 2022 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalada Kale 0
Gool uu madax ku dhaliyay Scott McTominay ayaa Manchester United ka caawiyay inay 1-0 kaga badiyaan Aston Villa wareegii saddexaad ee FA Cup-ka.
McTominay ayaa dhaliyay goolkiisii ​​labaad ee xilli ciyaareedkan ka dib toddobo daqiiqo oo kaliya oo uu ku sugnaa Old Trafford Isniintii, taas ayaana ku filnaatay in uu sameeyo kulan wareega afraad ah oo ay kula ciyaaraan gurigooda Middlesbrough.
Aston Villa oo uu tababare u yahay Steven Gerrard ayaa iyaduna noqotay kooxdii lixaad ee Premier League ah ee ka hadhay tartanka FA Cup, waxaana ka horreeyey Arsenal, Watford, Newcastle, Burnley iyo Leeds United.
Manchester United ayay ahayd inay hoggaanka dheerataysato daqiiqaddii 74aad, markaas oo uu Greenwood kubbad lasoo dhaafay Target kaddibna uu xerada ganaaxa la yimid, taas oo uu ku toogtay goolka halkii ay ahayd inuu u dhiibo Rashfrod oo meel cidlo ah taagnaa. Alla maxay fursad iska lumiyeen.
Manchester United ayaa guusha cidhiidhiga ah ee ay ka gaadhay Aston Villa waxay ugu gudubtay wareegga afraad ee FA Cup oo ay ku loollamayaan 32 kooxood oo ay kala-badh ku hadhi doonaan kulamada halka is-arag ah ee horraanta bisha dambe ee November la ciyaari doono.